Ukuthengiswa kwamaqembu kube nomthelela ongemuhle kubalandeli - Bayede News
Isithombe: Lefty Shivambu/Gallo Images
Ukudayiswa kwamaqembu ngale ndlela kungase kuxoshe abalandeli abeseka amaqembu amakhulu ezinkundleni
Muva nje ukudayiswa kwamaqembu agijima kuDStv Premiership nakuGladAfrika Championship sekuphenduke insakavukela umchilo wesidwaba. Lokhu sekushiye izinkumbi zabalandeli bala maqembu zingenamaqembu.
Kuwona lo nyaka iBidvest Wits idayise igunya layo lokudlala kuDStv Premiership idayisela iTshakhuma Tsha Madzivhandila FC (TTM) yaseLimpopo. Lokhu kusho ukushabalala kweviyo labadlala izinsimbi zomculo ebelinandisa emidlalweni yeBidvest Wits ikakhulukazi emidlalweni yaleli qembu yasekhaya eBidvest Stadium. Kuphinde kwalahleka abalandeli abesebeneminyaka belandela leli qembu njengoba beselineminyaka engama-99 laba khona.
Kunganzima kumlandeli obelandela leli qembu ebeselizakhele udumo ngokunqoba izicoco yize belingabalwa kumaqembu amakhulu ukuba ayolandela izimbangi.
Esikhathini esingesingakanani kuphinde kwamenyezelwa ukuthi iqembu iHighlands Park ebese lizakhele udumo kokuthwalisa kanzima amaqembu avakashela iMukholong Stadium, eTembisa, ngenxa yoxhaso elithola kubalandeli bayo nalo selinabanikazi abasha.
Bekugcwala kushode indawo yokuhlala uma kudlala leli qembu, ibebomvu yonke inkundla. Konke lokhu kushabalele ngesikhathi leli qembu lidayisela iTS Galaxy edlala imidlalo yayo eMbombela Stadium igunya lokugijima kuDStv Premiership.
NakuGladAfrica Championship kube yiso leso ngesikhathi iReal Kings ithengwa u-Andile Mpisane manje esizokwaziwa ngeRoyal AM. Lokhu kusho ukuthi abalandeli beKings kuzofanele bathole ikhaya elisha.
Noma baqhubeke nokulandela leli qembu njengoba lizogijima ku-ABC Motsepe KwaZulu-Natal. IKings kaBongani Ngidi manje isizothatha igama leNatal Rich Boys edlala kuso lesi sigaba kube yiyo iKings. Kwenzeka lokho nje vele iNatal Rich Boys ibingaphansi kwayo iKings. Yize kunjalo kodwa iqiniso lithi bancane abalandeli abazoqhubeka nokulandela ezikaNgidi ekubeni zidlala esigabeni esincane nesihlezi sinezinkinga.
Amanye amaqembu amasha kulesi sigaba iSikhukhune FC ethenge iTTM neCape Town Stars ethenge iTS Galaxy. IBloemfontein Celtic ekeyaba undabuzekwayo yacisha yadayiswa kwazise noTim Sukazi (ongumnikazi weTS Galaxy) wayephumele obala wathi sekungeyakhe usezoyisa kwaNdebele eMpumalanga, yasinda ngokulambisa.
Abalandeli bashaya phansi ngonyawo bephikisana nokudayiswa kwaleli qembu elinomlando olujulile, elidume ngabalandeli ababizwa ngeSiwelele abagcwala iDr Petrus Molemela Stadium bacule uqala umdlalo uze uyophela behlobe ngemifaniswano yeqembu beholwa uMsila Botha ongumlandeli oqavile.
Nosomabhizinisi uLebohang Mokoena waze wangenelela ukusiza ukutakula leli qembu. Kumanje leli qembu lisethubeni lokuyodlala umdlalo wamanqamu weMTN 8 njegoba lizobhekana neSuperSport United kowandulela owamanqamu kusasa kanti lizodlala nakuCAF Confederation Cup.
Elinye iqembu elidayisiwe ngaMaZulu FC kodwa ngenhlanhla lathengwa usomabhizinisi wakhona esifundazweni iKwaZulu-Natal uSandile Zungu, lokho kusho ukuthi abalandeli bawo basazoqhubeka nokuwaseka.
Phambilini abalandeli bamaqembu afana neMpumalanga Black Aces basala dengwane ngesikhathi iphenduka iCape Town City isuka eMpumalanga. Okwenza isifundazwe iMpumalanga ingabe isaba nalo iqembu eligijima esigabeni esiphezulu kwalahleka izinkumbi zabalandeli.
IManning Rangers FC eyaba iqembu lokuqala ukunqoba iPremier Soccer League (PSL) ngesizini yowe-1996/97 yadayiswa ngowezi-2005 kwashabalala umlando osuka ngowe-1928 kanye nabalandeli abasebeneminyaka beseka leli qembu.
Lokhu kudayiswa kwamaqembu kungase kuxoshe abalandeli abeseka amaqembu ikakhulu ezinkundleni. Lokhu kubonakala ngesikhathi amaqembu amakhulu iKaizer Chiefs, i-Orlando Pirates neMamelodi Sundowns bedlala ekuhambeni kuba ngabalandeli bala maqembu agcwalisa izinkudla.
Kunzima ukukhulisa isizinda sabalandeli kumaqembu amancane bengazi ngekusasa labo kwazise amaqembu asedayiswa ubuthaphuthaphu.
Yize kubuhlungu kubalandeli kodwa angeke kwagxekwa izikhulu zamaqembu ngokudayisa amaqembu, ibona abasuke bazi izinkinga abasuke bebhekene nazo bebona nokuthi lokhu okusuke kubekwe etafuleni ileso sikhulu esuke sizothenga kusuke kuconsisa amathe nezinkinga ziphela.
Uma kungakhulunywa iqiniso, izikhulu zeBidvest Wits bezingafisa ukuthi ziqhubeke nokuphatha leli qembu, zingene nalo emlandweni wokuhlanganisa iminyaka eli-100 laba khona kodwa ngenxa yezinkinga ziphoqekile ukulidayisa.